၂၀၁၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် (၁၀၀) စာရင်း ထုတ်ပြန် , - ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း စာရင်းဝင်လာတဲ့ မြန်မာနဲ့ အောက်ဆုံး ရောက်သွားတဲ့ စင်္ကာပူ ~ ITmanHOME
05:39 knowledge No comments
၂၀၁၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် (၁၀၀) စာရင်း ထုတ်ပြန် , - ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း စာရင်းဝင်လာတဲ့ မြန်မာနဲ့ အောက်ဆုံး ရောက်သွားတဲ့ စင်္ကာပူ
ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်း စာရင်းဝင်လာတဲ့ မြန်မာနဲ့ အောက်ဆုံး ရောက်သွားတဲ့ စင်္ကာပူ
ဗြိတိသျှ ကိုလမ်ဘီယာတက္ကသိုလ်က ပြုလုပ်တဲ့ The Eco2 Index ဂေဟစနစ် အညွန်းကိန်းမှာ
စင်္ကပူနိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ အဆိုးဆုံး စာရင်းမှာ ပါဝင်သွားပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ အဆိုးဆုံး ငါးနိုင်ငံက
၁။ စင်္ကာပူ ၂။ ဂျော်ဒန် ၃။ ကိုးရီးယား ၄။ အစ္စရေး ၅။ ကူဝိတ်နိုင်ငံ တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
၁။ ဗော်လဗီးယား ၂။ အင်ဂိုလာ ၃။ နမီးဘီးယား ၄။ ပါရာဂွေး ၅။ အာဂျင်တီးနား တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေထဲမှာ မြန်မာက ထိပ်ဆုံးပြေးနေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ထဲမှာ မြန်မာက အဆင့် ၃၂ မှာရှိပါတယ်။ မလေးရှားက အဆင့် ၈၀ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံက အဆင့် ၉၆ ကိုရောက်သွားပါတယ်။ ဒီသုတေသနက ကမ္ဘာ့ဘဏ်က အချက်အလက်တွေကို အခြေခံပြီး လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
စင်္ကာပူရဲ့ လေအေးစက်တတ်ထားတဲ့ ကြီးမားတဲ့ ရှော့ပင်းမောတွေနှင့် လူထုရဲ့ စားသုံးမှုတွေက ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းတွေဟာ စင်္ကာပူမှာရှိတဲ့ စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့မြေနဲ့ စွမ်းအင်ကို မမျှမတ ဖြစ်စေပါတယ်။ စင်္ကပူရဲ့ အဓိက ပြသနာက စွမ်းအင်နဲ့ ရေကို နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တွေကနေ တင်သွင်းနေရတဲ့ ပြသနာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း မလေးရှားနိုင်ငံက ၂၀၆၁ ခုနှစ်ထိ စင်္ကာပူအတွက် လိုအပ်တဲ့ ရေကိုဖြည့်ဆည်းပေး ဖို့သဘောတူထားပါတယ်။
Sources; Singapore: The World’s “Unhealthiest” Country?
ကျွန်တော် တစ်ကယ်မရှင်းလို့မေးပါရစေ။ အပြု၊ အပျက်သဘောဘာမှမရှိပါဘူး။
အင်ဒိုတို့ မလေးတို့မှာ ရှိတဲ့ သစ်ပင် သစ်တောနဲ့ ဂေဟစနစ် ထိန်းသိမ်းမှုဟာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံထက် မြေပုံအရရော လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အပိုင်းမှာရော များပြားသာလွန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် ဒီဂေဟစနစ်အညွန်းကိန်းဆိုတာ ဘယ်လိုအချက်တွေပေါ်မူတည် ဆုံးဖြတ်သလဲဆိုတာ သိချင်မိပါတယ်။
These are potential of Myanmar but as long as people allowed government to mismanage its resources and if the country is still lagging behind other developing economies and if the government is not competent, chances are that Myanmar will end up again in dire poverty.
(သယံဇာတမရှိ၊ နိုင်ငံအကျယ်အဝန်းလည်း အလွန်သေးငယ်လှသော လူဦးရေ ၅ သန်းကျော် စင်္ကာပူ၏ ဂျီဒီပီက ၂၀၀ ဘီလျံရှိပြီး၊ ပျမ်းမျှတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေက ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀ ရှိ။ အာရှကျားလေးကောင်စာရင်းဝင်။ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေအရ အမေရိကန်နဲ့ တောင် သိပ်မကွာ။ စိုက်ပျိုးမြေကျယ်ပြန့် ၊ သဘာဝသယံဇာတကြွယ်ဝ၊ အရှေ့ တောင်အာရှ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြန်မာပြည်၏ ဂျီဒီပီမှာ စင်္ကာပူ၏ လေးပုံတစ်ပုံပင်မရှိသေးပါ။
တစ်ခုလိုချင်ရင်တစ်ခု တော့ ပေးဆပ်ရမှာပေါ့။
Moderately rich in natural resource, considerable poor in Human resource, vice versa with Singapore.
သဘာဝသယံဇာတများပေါကြွယ်လည်း နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှေးကွေးတာ ၊
အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံ စာရင်းဝင်နေတာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းနေလား?